Qubanaha » Isbadalka lagu sameynaayo Gudoomiye kuxigeenada Gobolka Banaadir oo Caqabad weyn ka taagantahay.
Isbadalka lagu sameynaayo Gudoomiye kuxigeenada Gobolka Banaadir oo Caqabad weyn ka taagantahay.
Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa wada qorshe bilow ah oo is bedel lagu sameynayo Kuxigeenadiisa, si maamulkiisa u noqdo waji cusub.
Xafiiska Guddoomiyaha ayaa tan iyo markii uu xilka la wareegay, waxaa hareeyay shaqsiyaad badan oo xilal doon ah, waxaana loo badinayaa in wajiyada cusub ee ku soo biiri doona Maamulkiisa ay noqdaan qurbo joog ah.
Hadalkii Guddoomiye Taabid ka jeediyay munaasabadii soo dhoweynta aheyd ayaa dad badan ay shaki geliyeen in Guddoomiyuhu qaadi doono tallaabo ka duwan tii ay qaadeen Guddoomiyeyaashii horay u soo maray Gobolka Banaadir.